ဇွန်လအတွက် ထီလက်မှတ် များ အားလုံးရောင်းခဲ့ရပြီး ဇူလိုင်လ (၁) ရက် ထီ ဖွင့်ပွဲအတွက် ဆုကြေးငွေအပို ကျပ်သန်း (၂၅၀) ထည့်ပေးထားဟု ဆို – Zartiman
ဇူလိုင်(၁)ရက် ထီဖွင့်ပွဲတွင် အထူးဆုကြီး အနေဖြင့် ကျပ်သိန်း တစ်သောင်းခွဲ (၁)ဆု ၊ ကျပ်သိန်း တစ်သောင်း (၁)ဆု၊ ကျပ်သိန်း ငါးထောင် (၂)ဆု၊ ကျပ်သိန်း နှစ်ထောင် (၅)ဆု ၊ ကျပ်သိန်း တစ်ထောင် (၇)ဆု ချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ဆုတစ်ဆုချင်းစနစ်အနေဖြင့် ကျပ်သိန်းငါးရာ (၁၈)ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ရာ (၂၁)ဆု၊ ကျပ်သိန်း တစ်ရာ (၂၆)ဆု၊ ကျပ်သိန်း ၅၀ (၂၆)ဆု၊ ကျပ်သိန်းနှစ်ဆယ် (၂၉)ဆု၊ ကျပ် ဆယ်သိန်း (၃၂)ဆု၊ ဝေဝေဆာဆာ ပဒေသာဆုမဲစနစ် တွင် ကျပ်သုံးသိန်း (၁၅၀)ဆု၊ ကျပ်နှစ်သိန်း (၁၅၀၀)ဆု၊ ကျပ်တစ်သိန်း (၁၈,၀၀၀) ဆုနှင့် ကျပ်ငါးသောင်း (၂၀၀,၀၀၀) ဆုချီးမြှင့် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထို့ပြင်ဘဏ္ဍာသိမ်းရငွေ ကျပ်သန်း ၂၅၀ မှ တစ်ဆုချင်း ဆုမဲ ကျပ် ဆယ်သိန်း (၄)ဆု နှင့် ဝေဝေဆာဆာဆုမဲများ ဖြစ်သည့် ကျပ်သုံးသိန်း (၂၀)ဆု၊ ကျပ်နှစ်သိန်း (၂၀၀) ဆု၊ ကျပ် တစ်သိန်း (၂၀၀၀)ဆု၊ စုစုပေါင်း ၂၂၂၄ ဆု ကို ထပ်မံ ချီးမြှင့်ပေးသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီးဌာနမှ သိရပါသည်။ဇွန်လ အတွက် ထီလက်မှတ် များအား “က’’ အက္ခရာ မှ “ကစ” အက္ခရာ အထိ စုစုပေါင်း အက္ခရာ ၃၉ လုံးရောင်းချခဲ့ ပြီး အကုန်ရောင်းကုန်ခဲ့ကြောင်း ပြည်တွင်းအခွ န်ဦးစီးဌာနက ကြေညာလိုက်သည်။
ထို့အပြင် သတ်မှတ်ကာလတွင်လာရောက်ထုတ်ယူခြင်းမရှိသော ဘဏ္ဍာသိမ်းငွေမှ ကျန်းသန်း ၂၅၀ ကို ဇူလိုင်လ ၁ ရက် တွင် ကျင်းပမည့် ၁၇ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေထီသိန်းဆုဖွင့်ပွဲတွင် ထပ်တိုးချီးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ပြည်တွင်းအခွန်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး က “COVID-19 ကာလ မှာ လူတွေ အိမ်ပြင်မထွက်ကြတဲ့အချိန် ထီလက်မှတ် တွေ အများကြီး ရောင်းမကုန်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အခုဇွန်လမှာ တော့ ထီလက်မှတ် အကုန်ရောင်းကုန်ခဲ့လို့ ထီလက်မှတ်ရောင်းအား ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပါပြီ။
လာမထုတ်တဲ့ ဘဏ္ဍာသိမ်း ငွေ က ကျပ် ၁ ဘီလီယံ ရှိတယ်။ အဲ့ဒီ့ထဲ က ကျပ်သန်း ၂၅၀ ကို ထပ်တိုးဆုမဲ အဖြစ် ဇူလိုင် ၁ ရက် နေ့ မှာချီး မြှင့်သွားမှာပါ’’ ဟုပြောခဲ့သည်။၂၀၂၀ပြည့်နှစ် မေလတွင် ရောင်းမကုန်သည့် အောင်ဘာလေထီလက်မှတ် ၆ သိန်းကျော် ရှိခဲ့ပြီး ဧပြီလတွင် ရောင်းမကုန်သည့် ထီလက်မှတ် ၁.၈ သန်းကျော်ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ၁၇ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ပွဲအ တွက် ရောင်းချရသည့် အက္ခရာ ၃၉ လုံးဖြစ်၍ ထီစာအုပ် ၃,၁၉၀,၉၀၂ အုပ်ဖြစ်ပြီး ထီလက်မှတ်စောင်ရေ ၃၅,၀၉၉,၉၂၂ စောင်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ထီလက်မှတ် ရောင်းရငွေမှာ ကျပ်သန်းပေါင်း ၃၁၉၀၉. ၀၂၀ ဖြစ်ကြောင်း၊ ၎င်းရောင်းရ ငွေထဲမှ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း ခွဲဝေချီးမြှင့်မည့် ဆုငွေမှာ ၁၉၁၄၅. ၄၁၂ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
Ref – ပြည်တွင်းအခွန်ဦးစီးဌာန
ဇှနျလအတှကျ ထီလကျမှတျ မြား အားလုံးရောငျးခဲ့ရပွီး ဇူလိုငျလ (၁) ရကျ ထီ ဖှငျ့ပှဲအတှကျ ဆုကွေးငှအေပို ကပျြသနျး (၂၅၀) ထညျ့ပေးထားဟု ဆို
ဇူလိုငျ(၁)ရကျ ထီဖှငျ့ပှဲတှငျ အထူးဆုကွီး အနဖွေငျ့ ကပျြသိနျး တဈသောငျးခှဲ (၁)ဆု ၊ ကပျြသိနျး တဈသောငျး (၁)ဆု၊ ကပျြသိနျး ငါးထောငျ (၂)ဆု၊ ကပျြသိနျး နှဈထောငျ (၅)ဆု ၊ ကပျြသိနျး တဈထောငျ (၇)ဆု ခြီးမွှငျ့သှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ဆုတဈဆုခငျြးစနဈအနဖွေငျ့ ကပျြသိနျးငါးရာ (၁၈)ဆု၊ ကပျြသိနျးနှဈရာ (၂၁)ဆု၊ ကပျြသိနျး တဈရာ (၂၆)ဆု၊ ကပျြသိနျး ၅၀ (၂၆)ဆု၊ ကပျြသိနျးနှဈဆယျ (၂၉)ဆု၊ ကပျြ ဆယျသိနျး (၃၂)ဆု၊ ဝဝေဆောဆာ ပဒသောဆုမဲစနဈ တှငျ ကပျြသုံးသိနျး (၁၅၀)ဆု၊ ကပျြနှဈသိနျး (၁၅၀၀)ဆု၊ ကပျြတဈသိနျး (၁၈,၀၀၀) ဆုနှငျ့ ကပျြငါးသောငျး (၂၀၀,၀၀၀) ဆုခြီးမွှငျ့ သှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
ထို့ပွငျဘဏ်ဍာသိမျးရငှေ ကပျြသနျး ၂၅၀ မှ တဈဆုခငျြး ဆုမဲ ကပျြ ဆယျသိနျး (၄)ဆု နှငျ့ ဝဝေဆောဆာဆုမဲမြား ဖွဈသညျ့ ကပျြသုံးသိနျး (၂၀)ဆု၊ ကပျြနှဈသိနျး (၂၀၀) ဆု၊ ကပျြ တဈသိနျး (၂၀၀၀)ဆု၊ စုစုပေါငျး ၂၂၂၄ ဆု ကို ထပျမံ ခြီးမွှငျ့ပေးသှားမညျ ဖွဈကွောငျး ပွညျတှငျး အခှနျမြားဦးစီးဌာနမှ သိရပါသညျ။ဇှနျလ အတှကျ ထီလကျမှတျ မြားအား “က’’ အက်ခရာ မှ “ကစ” အက်ခရာ အထိ စုစုပေါငျး အက်ခရာ ၃၉ လုံးရောငျးခခြဲ့ ပွီး အကုနျရောငျးကုနျခဲ့ကွောငျး ပွညျတှငျးအခှ နျဦးစီးဌာနက ကွညောလိုကျသညျ။
ထို့အပွငျ သတျမှတျကာလတှငျလာရောကျထုတျယူခွငျးမရှိသော ဘဏ်ဍာသိမျးငှမှေ ကနျြးသနျး ၂၅၀ ကို ဇူလိုငျလ ၁ ရကျ တှငျ ကငျြးပမညျ့ ၁၇ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလထေီသိနျးဆုဖှငျ့ပှဲတှငျ ထပျတိုးခြီးမွှငျ့သှားမညျဖွဈကွောငျး သိရသညျ။ပွညျတှငျးအခှနျမှ တာဝနျရှိသူတဈဦး က “COVID-19 ကာလ မှာ လူတှေ အိမျပွငျမထှကျကွတဲ့အခြိနျ ထီလကျမှတျ တှေ အမြားကွီး ရောငျးမကုနျဖွဈခဲ့တယျ။ အခုဇှနျလမှာ တော့ ထီလကျမှတျ အကုနျရောငျးကုနျခဲ့လို့ ထီလကျမှတျရောငျးအား ပုံမှနျပွနျဖွဈသှားပါပွီ။
လာမထုတျတဲ့ ဘဏ်ဍာသိမျး ငှေ က ကပျြ ၁ ဘီလီယံ ရှိတယျ။ အဲ့ဒီ့ထဲ က ကပျြသနျး ၂၅၀ ကို ထပျတိုးဆုမဲ အဖွဈ ဇူလိုငျ ၁ ရကျ နေ့ မှာခြီး မွှငျ့သှားမှာပါ’’ ဟုပွောခဲ့သညျ။၂၀၂၀ပွညျ့နှဈ မလေတှငျ ရောငျးမကုနျသညျ့ အောငျဘာလထေီလကျမှတျ ၆ သိနျးကြျော ရှိခဲ့ပွီး ဧပွီလတှငျ ရောငျးမကုနျသညျ့ ထီလကျမှတျ ၁.၈ သနျးကြျောရှိခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။ ၁၇ကွိမျမွောကျ အောငျဘာလေ ထီဖှငျ့ပှဲအ တှကျ ရောငျးခရြသညျ့ အက်ခရာ ၃၉ လုံးဖွဈ၍ ထီစာအုပျ ၃,၁၉၀,၉၀၂ အုပျဖွဈပွီး ထီလကျမှတျစောငျရေ ၃၅,၀၉၉,၉၂၂ စောငျရှိကွောငျး သိရသညျ။
ထီလကျမှတျ ရောငျးရငှမှော ကပျြသနျးပေါငျး ၃၁၉၀၉. ၀၂၀ ဖွဈကွောငျး၊ ၎င်းငျးရောငျးရ ငှထေဲမှ ၆၀ ရာခိုငျနှုနျး ခှဲဝခြေီးမွှငျ့မညျ့ ဆုငှမှော ၁၉၁၄၅. ၄၁၂ ဖွဈကွောငျး သိရသညျ။
Ref – ပွညျတှငျးအခှနျဦးစီးဌာန
၁၀ တန်း မအောင် ပေမယ့် တက်ရောက် သင်ကြားနိုင်တဲ့ အစိုးရ သက်မွေး တက္ကသိုလ်များ အကြောင်း
အသည်း တယားယား ဖြစ်အောင် လုပ်ပြနေတဲ့ လုလုအောင် ရဲ့ အမိုက်စားဗီဒီယို
ပုရိသတွေကို အမိုက်စားကပြထားတဲ့ ချိုဇင်ဝင်းပြည့်ရဲ့ ဗီဒီယို
သဘာဝအလှတရားတွေ ပေါ်လွင်အောင် ကပြနေတဲ့ ခေးဆက်သွင်
ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ အမိုက်စား ပုံစံနဲ့ ဂေါ် ပြလိုက် တဲ့ ပွင့်နဒီမောင် ရဲ့ ဗီဒီယို